2 Siyaabaha badbaadi MMS Faylal ay ku iPhone in a Computer Windows / Mac
> Resource > iPhone > Sida loo badbaadi MMS Faylal ay ku iPhone in Computer ah
Sidee baan u badbaadin karo taariikh aad u dheer MMS in aan computer?
Waxaan leeyahay ka MMS taariikhda dheer ee aan iPhone. Markii aan la qorsheeyo si loo badbaadiyo oo dhan oo iyaga ka mid in aan computer, ee ku lifaaqan (Badankoodna waa sawiro) aan si buuxda loo raran kartaa, si aan iyaga waxba badbaadin karin in roll camera ah ka hor inta aan iyaga lagu wareejiyo si aan computer. Sidee baan ku badbaadin karto oo dhan MMS files on my iPhone in kombiyuutarka? Fadlan caawi
Haddii MMS oo dhan ayaa weli aad iPhone, waxaa jira laba siyaabood oo aad u badbaadiyo kuwa MMS in computer, oo ay ku jiraan ku lifaaqan. Mid ka mid ah si toos ah aad ka baareyso iPhone si loo badbaadiyo files MMS in computer, iyo kuwa kale ee la soo saarida aad gurmad Lugood inay iyagii u hesho.
No arrinta habka aad jeceshahay, waxaad dooran kartaa inaad isticmaasho Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) . Labada iyaga u oggolaadaan in aad badbaadin files iPhone MMS in computer ee labada hab ku xusan ka hor. Waxay taageeraan iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iyo iPhone 3GS. Ka sokow soo baxaysa MMS aad iPhone, Wondershare Dr.Fone ee macruufka ha kartaa in aad soo kabsado MMS tirtiray aad iPhone. Just download version maxkamad si xor ah u leeyihiin isku day ah markii ugu horraysay. Waxaad iyaga ku eegaan karo ka hor inta iyaga lagu badbaadinayo in your computer.
Next, aynu hubi sida ay u badbaadin iPhone MMS in computer laba siyaabood hoos ku qoran. Qaado version Windows sida tusaale. Haddii aad tahay qof user Mac ah, waxa kale oo aad buuxin kartaa shaqo ee talaabooyin la mid ah.
Qaybta 1aad: Si toos ah iskaan oo ka iPhone badbaadin MMS files 5 / 4s / 4 / 3GS in computer
Qeybta 2: Waraaqda Lugood gurmad ah si loo badbaadiyo MMS on iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS
Qaybta 1aad: Si toos ah iskaan oo ka iPhone badbaadin MMS files 5 / 4s / 4 / 3GS
Tallaabada 1. Run Wondershare Dr.Fone ee macruufka iyo xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka
Aan isku dayno Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows) wada. Waxaa Orod on your computer ka dib markii la rakibey, iyo xiriiriyaan iPhone. Markaasay aad arki doonaa suuqa kala muhiimsan ee hoos ku qoran.
Waxaad si fudud u riixi kartaa "Start Scan" ee uu furmo suuqa ugu weyn. Barnaamijku waxa uu horay u socdo doonaa in baarista iPhone sida soo socota. Waxaad sidoo kale u tagi kartaa hab sare si aad u hesho baaritaan qoto dheer u ah iPhone adigoo gujinaya ah "Advanced Mode" hoose, haddii aad rabto in aad.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo badbaadin iPhone MMS si aad u computer
Waqtiga sawiridda, waxaad ku eegaan karo waxa helay natiijada scan. Marka aad hesho xogta aad doonayso, waxaad u yara karaa ama joojin karaa sawirka. Marka sawirka dhameystiray, dhammaan xogta laga helay waxaa loo kala saaraa qaybo.
Wixii MMS, waxaad iyaga ku eegaan kartaa adigoo gujinaya "Messages". Markaas waxaad ka arki kartaa content buuxda. Haddii aad rabto in aad si gaar ah badbaadin lifaaqa MMS ah, waxaad eegi kartaa "Lifaaq Message". All oo ka mid ah waxaa ka jira. Waxaad calaameysaa waxa aad rabto oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad u computer ka mid ah.
Fiiro gaar ah: In sidan, waxaa barnaamijka sidoo kale uu helayo dhawaan tirtiray MMS. Haddii aad rabto in aad u kala sooci, waxaad isticmaali kartaa badhanka dusheeda: bandhigaan waxyaabaha tirtiray oo keliya.
Tallaabada 1. kaabta aad iPhone la Lugood
First of dhan, ordo Lugood on your computer iyo xiriiriyaan iPhone in dib la Lugood. Ka dib waxa ay qabanayaan, waxaad u baahan tahay inaad baxdo Lugood on your computer. The file gurmad Lugood la aqrin. Next, aad u baahan tahay si aad u soo saaro.
Marka aad u Wondershare Dr.Fone on your computer, guji "kabsado Lugood ee kaabta File" dusheeda xirmin suuqa ugu weyn. Markaasay aad arki doonaa suuqa kala hoose. Dhammaan Lugood aad files gurmad kombiyuutarka waxaa la helay iyo waxaa ku qoran. Mid ka mid ah taariikhda ugu dambeeyay ee aad iPhone Dooro oo guji "Start Scan" Macdan content ku dhex jira.
Skaanka aad baabbi'in doonaa dhowr ilbiriqsi. Ka dib markii in, aad sabab u scan, taas oo la mid ah sida mid ka mid ah waxaad ka heli jidka ugu horeysay heli doonaa. Gujinaya "Messages", waxaad ku eegaan kara waxa ku qoran oo dhan MMS aad. Gujinaya "Lifaaq Message", waxaad si gooni gooni ah ay ku badbaadin karto ku lifaaqan MMS on your computer. Just calaamadee waxa aad rabto oo guji "Ladnaansho" in ay iyaga oo dhan la badbaadiyo on your computer ka mid ah.